Oxygen (2021) – Burmese Subtitle
BS Website တွင် ကြော်ငြာများ ထည့်သွင်းလိုပါက 0943019473 အားဆက်သွယ်စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
No escape. No memory. 90 min to live.May. 12, 2021France100 Min.TV-MA
ဒီတစ်ခါတော့ အသစ်ထွက်လာတဲ့ Drama, Fantasy, Sci-Fi အမျိုးအစား ပြင်သစ်ကားကောင်းလေးနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။
ဇာတ်လမ််းကတော့ ကောင်မလေးတစ်ယောက် အလုံပိတ်ထားတဲ့ သေတ္တာပုံစံအခန်းတစ်ခုထဲမှာနိုးလာပါတယ်။ ထူးဆန်းတာက သူကဘယ်သူဘယ်ဝါဆိုတာတွေ၊ ဘာဖြစ်လို့ဒီထဲရောက်နေရလဲဆိုတာတွေနဲ့ ကိုယ့်နာမည်ကအစ မမှတ်မိတာပါပဲ။ သူရောက်နေတဲ့အခန်းကနေ အဆင့်မြင့်ဆေးဝါးတွေနဲ့ သူ့ကိုယ်ကိုချိတ်ဆက်ထားပြီး သူပြောသမျှကိုအလိုအလျောက် ပြန်ဖြေကြားပေးတဲ့ မီလိုဆိုတဲ့ ကွန်ပြူတာစနစ်တစ်ခုပဲ ​ပါဝင်ပါတယ်။ သူ့ခေါင်းထဲမှာ Whမေးခွန်းတွေနဲ့ တန်းစီနေတုန်းမှာပဲ ပြဿနာကစပေါ်လာပါတယ်။ သူ့အခန်းထဲမှာရှိတဲ့ အောက်ဆီဂျင်ပမာဏက တစ်ဖြည်းဖြည်းလျော့ကျလာနေတာပါ။ ဒီအခြေအနေမျိုးမှာ သူ့အနေနဲ့ အသက်ရှင်သန်နိုင်ဖို့ နည်းလမ်းပေါင်းစုံကြိုးစားရှာဖွေရတာကို ရင်မောခံစားရမယ့်ကားလေးပါ။
ရုပ်ရှင်ကားမှာ သရုပ်ဆောင်အနည်းငယ်နဲ့ပဲ သရုပ်ဆောင်ရိုက်ပြထားပေမဲ့ ဇာတ်လမ်းတစ်ဝက်လောက်ကစပြီး ထင်မထားလောက်အောင်မြှုပ်ကွက်တွေနဲ့ မပျင်းရအောင် ဆွဲဆောင်ထားပါတယ်။ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းဇာတ်လမ်းလို့ ထင်ရပေမဲ့ ပြဿနာတွေက ထင်ထားတာထက် ပိုနက်နဲလာချိန်မှာတော့ ဘာတွေဆက်ဖြစ်မလဲ ကြည့်လိုက်ကြပါဦး။
IMDb Rating 6.5 15,179 votes
TMDb Rating 6.8 417 votes
Download GDrive 720p 792.02 MB
Download Mega 720p 792.02 MB
Download Mediafire 720p 792.02 MB
Download Mshare 720p 792.02 MB
Download Usersdrive 720p 792.02 MB
Download Mirrorace 720p 792.02 MB
Download GDrive 1080p 2.6 GB
Download OneDrive 1080p 2.6 GB
Download Mega 1080p 2.6 GB
Download Mediafire 1080p 2.6 GB
Download Mshare 1080p 2.6 GB
Download Usersdrive 1080p 2.6 GB
Download Mirrorace 1080p 2.6 GB